Ngaba kukho naziphi izinto ezinokuthi ziyaziwa malunga nokubeka kwiAngesi ezinokuthintela impumelelo yam?
Ewe, ndiyazi iimbalwa ezincinci ezaziwayo malunga nokubeka kwi-Amazon edla ngokukhawuleza umgca phakathi kwempumelelo ebalulekileyo yezoshishino kunye nokungaphumeleli ngokupheleleyo kuloo ndawo. Ndithetha imeko eqhelekileyo xa ungasebenzisa iinjongo eziphambili zegama lakho lokubala uluhlu olungenakulungele ngokupheleleyo. Okomnye, umzekelo, xa ungehluleki ukufumana uluhlu lwemiveliso elungileyo ngendlela echanekileyo, ngokukodwa kwiinkalo eziphambili zegama elingundoqo.Zonke izinto eziye zithathwa kunye akunakukukhusela kuphela ukufumana indawo efanelekileyo kwi-Amazon, kodwa inokuthi ihlawule i-traffic yangempela ye-intanethi, kwaye ekugqibeleni - ukuthengisa okuthe ngqo - fotos de aves rapaces. Ngoko, ngaphantsi ndiza kukubonisa iingcambu eziphambili ukuze uziphephe, okanye ubuncinane ufumane konke ukulungelelanisa ukuze naluphi na umphumo ongeyiphumo ekumgangatho wakho kwi-Amazon iya kuncitshiswa.
Inyaniso 1: I-A9 Algorithm yee-Amazon Ihloko njengegama elingundoqo elingundoqo
Abathengisi abaninzi kwi-Amazon bakholelwa ukuba ukubeka amagama athile kumxholo wesihloko kunye I-backend yegama eliphambili limele. Kodwa bonke bayangalunganga. Ngoba? Kalula nje ngokuba i-algorithm yangaphakathi ye-Amazon inikeza umdlalo ochanekileyo kuwo onke amagama asemqoka atholakala kwisihloko sakho somkhiqizo okanye kwenye indawo kwindawo yegama elingundoqo - kunye nalabo abathinjwe kwibhokisi yokukhangela ngabathengi abaphilayo. Kwaye abo baqhelana ne-SEO bayazi kakuhle: ukusebenzisa iincwadi eziphindaphindiweyo akuyona into entle ngokwenene. Inqobo yesi-2: Isihloko somkhiqizo kunye negama elingundoqo lemihlaba Inqanaba elilinganayo
Kukhohliswa ngokubanzi xa abantu banikela ngokwenene ubunzima obuthile ngokukodwa kwisihloko somkhiqizo, kunokuba nayiphi na insimu okanye icandelo ngaphakathi kwoluhlu lwemveliso yabo. Kodwa inyaniso kukuba itekiti yecatshulwa imithwalo enzima kakhulu-ewe, xa ikhangelwe emehlweni enjini ye-Google. Kwaye oku akuthethi ukuba into efanayo kufanele ibe yinyaniso malunga nokubeka kwi-Amazon. Abo bajonga ngokufanayo ngokucwangcisa umgangatho kwi-Amazon abakulungile.
Inyaniso 3: Iimpepha ezingapheliyo ziyakwenza ntoni ngeenkcukacha zegama elingundoqo
Masibhekane nalo - i-A9 ye-A9 yokusesha i-algorithm ayisayi kufuna ibinzana lomdlalo. Enyanisweni, kusebenza ngokudibanisa amagama athile kuphela ukuze kungabikho mfuneko yokulahla indawo yendawo yokwenza uluhlu ngokufaka amagama aphindaphindiweyo. Esikhundleni saloo nto, kungcono ukuba ulahlekise nayiphi na imiba kwaye ufake onke amagama angundoqo kwi-order ecocekileyo necacileyo.Ukwenza njalo, uya kuba nelinye igumbi elincinci eliye lashiya ukufumana ezinye iilwimi ezijoliswe kuzo.
Ingqinisiso 4: Ukumangalisa, ii-Commas kunye neenqununu zichaphazelekayo
I-A9 ye-Amazon ilandelelana. Ndiyathetha imeko xa ungathatha ingcambu yegama uze udibanise ukuhlukahluka kokuphela kwayo. Umzekelo, "ukutya," "ukutya," "ukutya," njalo njalo. Ngoko, nganye yezo ngundoqo zegama eliphambili iya kuthathwa njengento enye yokucinga. Ngokuphathelele ii-commas kwaye mhlawumbi nayiphi na enye indlela yokubhala iziphumlisi - i-Amazon iyayilahla yonke into. Yingakho kungekho sidingo sokuchitha ixesha lakho kuyo nayiphi na indlela eyenziwa ngaphaya kwelo - ayifumananga nantoni nakwizinga lakho kwi-Amazon.